Tizen 3.0 dia manomboka tonga ao amin'ny Samsung Gear S3 | Androidsis
Hatramin'ny nandaozan'i Samsung tanteraka ny sehatry ny Android Wear, ny modely Samsung dia nanjary safidy hafa tsy manan-kery eo amin'ny tsena, izay navela lasa mpanamboatra faharoa amin'ny smartwatches indrindra amidy manerantany, ao ambadiky ny Apple.
Hatramin'ny niandohany, Tizen dia manolotra ao amin'ny Gear S fahaleovan-tena sy fiasa lehibe kokoa izay mandraka ankehitriny, ary anio, dia tsy misy amin'ny sehatra Google Android Wear. Raha ny marina, ny sehatra finday an'i Google no hany nanjary safidy tokana ho an'ireo mpanamboatra lehibe indrindra raha tsy misy ny safidy hafa eny an-tsena.
Ity fanavaozana ity, izay nahatratra ny kinova 3.0 ny Tizen, dia mitana efa ho 260 MB ary mitondra fampiasa vaovao marobe, izay miavaka fomba fitsitsiana angovo izay mampiseho amintsika ny ora fotsiny, ary afaka mahatratra 40 andro ny fiainana bateria. Tsy misy dikany firy ny fomba fitsinjaram-pahefana amin'ity karazana ity, satria raha manana famantaranandro marani-tsaina ianao dia te hahazo tombony betsaka amin'izany.
Vaovao hafa atolotray ho antsika ity fanavaozana farany ny Gear S3 ity, dia mifandraika amin'ny làlan'ny manao refy, Raha ny marimarina kokoa, ny iray amin'ireo lesoka izay azo omena an'ity maodely Samsung ity, na dia tsy midika akory izany fa tsy marina tanteraka izy ireo. Io dia mamela antsika hampiasa ringtone avy amin'ny finday avo lenta ihany koa haneno amin'ny Gear S3 isaky ny mahazo antso isika.
Nihatsara koa ny fampidirana an'i Bixby, na dia amin'izao fotoana izao dia mbola mpanampy voafetra tokoa izy io satria amin'ny teny Anglisy sy Koreana ihany no misy azy, na dia araka ny filazan'ny orinasa aza dia tokony hanomboka hihoatra ny fahombiazan'ny fiteny hafa toy ny Espaniôla, frantsay ary alemà izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Manomboka tonga ao amin'ny Samsung Gear S3.0 ny Tizen 3
Hoy ny dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, misaotra betsaka anao nizara azy!
Mamaly ny fanjakana
Amin'izao fotoana andrana izao hatramin'ny omaly dia namaky azy aho saingy mbola tsy miseho amin'ny finday na amin'ny famataranandro ny fanavaozana, hiandrasana hatrany
Bynknd dia hoy izy:
Ny maodeliko dia ny SM-R760 ary vao haingana aho no nividy ilay smartwatch izay noheveriko fa ho azo alefa ilay kinova raha vao nahazo aho saingy indrisy mbola tsy nandingana ahy izy io: - /
Valiny tamin'i Bynknd
Mozika maimaim-poana mandritra ny 30 andro ao amin'ny Amazon Music Unlimited sy 10 Euro handany amin'ny Amazon raha mpampiasa Prime ianao
Ny OnePlus 5 dia hajanona noho ny OnePlus 5T